Meghari na Nzaghachi na Nzaghachi Na-eme Ka Nsonaazụ Ahịa Ọdịnaya | Martech Zone
Meghari na Nzaghachi na Nzaghachi Na-eme Ka Nsonaazụ Ahịa Ọdịnaya
Fraịde, Ọgọstụ 11, 2017 Fraịde, Ọgọstụ 11, 2017 Douglas Karr
Kedu otu ngwa ahịa na ngwa ngwa na-esi azaghachi ma na-eme mgbanwe maka nzaghachi ndị ahịa na-aga n'ihu aghọwo ihe ọhụrụ na-achọpụta ọrụ arụmọrụ. Dị ka 90% nke ndị ahịa ahịa 150 a nyochara, nzaghachi-ma ọ bụ ikike isi mmalite, ghọta wee mezie ngwa ngwa na nzaghachi, mmasị, na mkpa-dị mkpa, ma ọ bụrụ na ọ bụghị nkatọ, na nnyefe nke ahụmịhe ndị ahịa pụrụ iche.
Naanị 16 pasent nke ndị na-ere ahịa na-eche na nzukọ ha na-anabata ndị na-azụ ahịa, na-emeghị mgbanwe na ngwaahịa, nkwakọ ngwaahịa, ọrụ, na ahụmịhe dabere na ezigbo arịrịọ ndị ahịa na nzaghachi.
Budata: Iwu Ndi choro
Akụkọ ahụ kọwara otú ndị ahịa ahịa agile si eme omume na nzaghachi ndị ahịa iji mee ka uto. Ọ bụ nsonaazụ nke ọmụmụ nyocha zuru ezu nke CMO Council mebere na mmekorita ya Platform Identification Platform nke Danaher Corporation ụlọ ọrụ, ndị bụ ndị ọhụụ na ahịa yana ngwaahịa nkwakọ ngwaahịa.
Ọmụmụ ihe ahụ nyochara otu òtù si arụ ọrụ mgbe ọ na-abịa n'ịzaghachi ndị ahịa na itinye data ndị ahịa na ọgụgụ isi iji nyefee ahụmịhe ziri ezi n'oge kwesịrị ekwesị na site na ọwa nke nhọrọ ndị ahịa, ma ọ bụ akara aka ma ọ bụ nke dijitalụ.
Okwu Kachasị Egbu Egbu Oge Azụmaahịa
Enweghị ego ịga n'ihu na mmelite ndị na-agakarị na akara aka
Enweghị data ma ọ bụ ọgụgụ isi iji mee mgbanwe dabere na mmeghachi omume nke ndị ahịa na omume ya
Ndị otu na-arụ ọrụ na-ekewa ahia site na mkpebi na mkpebi nkwakọ ngwaahịa
Ndi na ere ahia enweghi ike na-arụ ọrụ ngwa ngwa ma ọ bụ izute ngwa ngwa usoro iheomume
Iji dozie nsogbu ndị a, ndị na-ere ahịa na-eche na mgbanwe ọdịbendị ga-adị mkpa, gụnyere usoro na ngwa ọhụụ iji gbanwee mgbanwe ngwa ngwa, ebe pasent 60 nke ndị zaghachiri kwenyere na ndị ahịa ga-elekwasị anya na ngwaahịa ga-eme maka ọganihu ọ bụla ọ bụla a ga-enwe. .
Ndị ahịa na-atụ anya n'ụzọ zuru ezu maka ụdị itinye aka na ọsọ nke ìhè-ka emechara, ọ bụ ahụmịhe ndị ahịa pụrụ iche site na ụdị dị ka Amazon na Starbucks gosipụtara na nzaghachi ngwa ngwa, ịhazi onwe na ezigbo oge (ma ọ bụ nke dị adị n'ezie) mmeghe omnichannel ga-ekwe omume. na ịpị bọtịnụ ma ọ bụ pịa nke ngwa. Nke a bụ itinye aka na ọsọ nke dijitalụ, onye ahịa ahụ na-atụkwa anya nzaghachi yiri nke ahụ na ahụmịhe niile, n'agbanyeghị ma ọwa ahụ bụ nke anụ ahụ ma ọ bụ nke dijitalụ. Liz Miller, Onye isi oche ndị isi ahịa maka CMO Council
Ná nkezi, ndị na-ere ahịa na-eche na ha nwere ike ịzaghachi ma ọ bụ meghachi omume na nzaghachi ndị ahịa, arịrịọ, aro ma ọ bụ mkpesa ndị akọwapụtara maka mkpọsa ahịa na-erughị izu abụọ.
Ndị otu ahịa ahịa Agile na-achọ idozi ogbugbu a na njikọ aka dị ka pasent 53 nke ndị zaghachirinyere kwenyere na ebumnuche ha bụ ị nyefee mmelite ma gbanwee mgbanwe na akara aka na n'okpuru 14 ụbọchị, yana pasent 20 nke ndị ahịa na-atụ anya ịhụ na ọdịiche ahụ dị naanị 24 oge iji nyefee mmelite gafee ahụmịhe anụ ahụ.
Dabere na ndị ọkachamara na Danaher Corporation-nke pọtụfoliyo ya gụnyere ụdị dị ka Pantone, MediaBeacon, Esko, X-Rite na AVT-ọ bụrụ na a ga-atụgharị nzaghachi na mgbasa ozi anụ ahụ ka ọ bụrụ ezigbo uru nke asọmpi, a ga-ajụ ajụjụ ndị gbara ọkpụrụkpụ ma gha iwere usoro. .
Aro iji meziwanye nzaghachi:
Corral ndị na-eme ọdịnaya niile: Ndị otu a ọ na - eji usoro dị iche iche ugbu a? Anyị enwere ike ịkwado otu iji wepụ ọnụ ahịa ndị ọzọ?
Jikọọ teknụzụ maka nghọta ozugbo: Kedu teknụzụ ole anyị ji eji eweta nkwukọrịta anụ ahụ anyị na dijitalụ niile n'ahịa? Ebee ka adịghị mma aka-offs?
Kama ilekwasị anya n'otu ọrụ, chee echiche banyere otu anyị nwere ike mfe niile uru yinye: Gịnị ga-emetụta azụmahịa anyị ma ọ bụrụ na oge anyị n'ahịa maka nkwukọrịta anụ ahụ na nke dijitalụ bụ ọkara nke ihe ọ bụ taa?
Site na nnukwu ọganiihu na nso nso a na nnyefe mgbasa ozi dijitalụ, ọ dị nwute, inwe ike ịgbanwe mgbanwe na mgbasa ozi anụ ahụ abụrụla laggard. Ọtụtụ ndị mmadụ amaghị ihe ga-ekwe omume ruo mgbe ha kpebiri na ọ ga-adị. Ọganihu na teknụzụ taa na-enye ndị isi azụmaahịa ohere ịchọ ọsọ ọsọ, ogo dị elu na nghọta dị ukwuu site na ndị mmekọ na ndị na-ere ahịa karịa ka ọ dịbu. Ọbụna ihe dị ike maka ụdị ụwa bụ na teknụzụ dị otú ahụ dị n'akụkụ ụwa niile. Joakim Weidemanis, onye isi otu na onye isi oche, njirimara ngwaahịa na Danaher Corporation
Kedu Afọ Mkpebi Na-emetụta Mkpebi chazụ Ihe?
A na-eduzi ọmụmụ ihe ahụ n'oge opupu ihe ubi nke 2017 ma gụnye ntinye sitere na ndị isi ahịa 153 dị elu. Pasent iri ise na anọ (54) nke ndị zaghachirinụ nwere aha nke CMO, Onye isi ahịa ma ọ bụ Onye isi oche nke Marketing, na pasent 33 na-anọchite ụdị akara nwere ego karịrị $ 1 ​​ijeri (USD).
Tags: AVTcmo kansulcontent MarketingcsrNdị ọrụ nlekọta ndị ahịaLọ ọrụ DanaherEskoMediaBeaconPantonenzaghachiIwu NzaghachiX-ụdị
5 Mmefu Mmefu ego nke ahia iji zere